पारिश्रमिक मोटो लिने, फ्लपको जस चाहिँ नलिने ? – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityपारिश्रमिक मोटो लिने, फ्लपको जस चाहिँ नलिने ?
फिल्म चल्नकुन कुन कुराले काम गर्छ । कथा, हिरो, हिरोइन, निर्देशक, गीतसंगीत आदि आदि । एउटा सिनेमा धेरै मिहेनिती मानिसहरुको कडा लगावको प्रतिफल पनि हो ।
तर, सिनेमाको व्यापारमा यत्ती कुराले मात्र हुँदैन । सिनेमा चल्नका लागि कलाकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । केही नभएपनि २ दिन हलमा कलाकार तान्न सक्नुपर्छ । यसपछि त सिनेमा जस्तो छ, त्यही अनुसार नै काम हुने हो ।
बलिउडमा रेश ३ ले ३ दिनमै सय करोड कटाएको हो । अभिनेता सलमान खानको स्टारडमले सय करोड पार गरेको हो । तर, सिनेमाले लाइफ टाइम व्यापार १६० करोड मात्र पुर्यायो । तर, ३ दिनमा सलमानले आफ्नो काम गरेका थिए ।
यसैले, सिनेमाले इनिसियल व्यापार पनि गरेन भने कलाकार पर हुन मिल्दैन । तर, नेपालमा फिल्म चले आफूले गर्दा चल्यो नचले फिल्म नै झुर थियो र चलेन भनेर पर हिड्ने कलाकारको संख्या धेरै छ ।
अहिले त कलाकारहरु आफू चलेको दम्भ दिदै महंगो पैसा लिन थालेका छन् । कलाकारले पारिश्रमिक बढाएपछि सिनेमा नचलेको जिम्मा लिन पनि सक्नुपर्छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा कलाकारलाई यो बिषयमा सोधियो भने, जवाफ एउटै आउँछ । फिल्ममा भनेको आफ्नो कारणले मात्र नचल्ने भन्दै उनीहरुले टिमको काम भएको तर्क गर्छन् । यदि, आफ्नो कारणले सिनेमाको इनिसियल व्यापार पनि हुँदैन र त्यसको जिम्मा लिन कलाकारले सक्दैनन् भने महंगो पारिश्रमिक लिएर निर्माताको ढाड किन सेक्छन् ?
सिनेमा चलेको अवस्थामा आफू सुपरस्टार भएको भन्दै पारिश्रमिक दिनदिनै बढाउन तयार छन् नेपालमा कलाकार । तर, सिनेमा चलेन भने दोष अरुलाई थोपरेर पन्छिन पनि जानेका छन् नेपाली कलाकारले । आखिर, यस्तो किन ?
बजारको अवस्था भन्दा चार गुणा बढी पारिश्रमिक डिमाण्ड गर्ने, मनलाग्दी सिनेमा खेलिदिने, अफर आएका सबै स्विकार गरिदिने अनी सिनेमा चलेन भने म मात्र कारण होइन भनेर पन्छिन मिल्दैन । तर, कलाकारहरु कलाकारले मात्र सिनेमा नचल्ने अर्ती दिन लामै समय खर्चिन्छन् ।